Madaxwayne Farmaajo oo sanad kadib booqashadiisii labaad ku tagaya Puntland – Radio Daljir
Madaxwayne Farmaajo oo sanad kadib booqashadiisii labaad ku tagaya Puntland
Janaayo 26, 2019 4:50 b 1
Madaxwaynaha Dowladda Faderaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa saakay kusoo jeeda magaalada Garoowe ee caasumadda Puntland.
Soo dhowaynta wafdiga madaxwayne Farmaajo ayaa siwayn looga dareemayaa magaalada Garoowe ee caasumadda Puntland, waxaana uu ka mid yahay madaxda ka qaybgalaya caleema saarka madaxwaynaha cusub ee dowladda Puntland Siciid Cabdulaahi Deni.
Shacab badan ayaa ka qaybgalaya soo dhowaynta madaxwaynaha.
Waa markii labaad ee madaxwaynaha uu yimaado Puntland tan iyo markii xilkaasi uu qabtay, waxaana booqashadiisii hore uu ku yimid Puntland 7dii bishii Janaayo ee sanadkii hore, xiligaasi oo xiriirka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada uu ahaa mid wanaagsan, waxaana uu dhagax dhigay mashaariic aan wali waxba laga qaban.
Magaalada Garoowe ayaa marti gelisay madaxda maamulada dalka, dowladda faderaalka iyo siyaasiyiin kasoo horjeeda siyaasadeeda, kuwaasi oo ku coloobay arrimaha siyaasadda ee dalka.
Sanad kadib mashaariicdii madaxwayne Farmaajo uu ka dhagax dhigay Puntland oo aan la fulin
Cabdiraxmaan dalku waa xor dadkuna waa dadkaagii!
Axmed 1 year ago
Dalku waxa uumarayaa in ruux kasta oo siyaasada maalin gala uu waxbaan u qabanaa ku been sheego kana raadsada danihiisa gaarka ah